Tag: ဖောက်သည်စာရင်း Martech Zone
အခမဲ့လူ ဦး ရေဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာများ? ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Facebook!
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, သြဂုတ်လ 5, 2015 စနေနေ့, ဇန်နဝါရီလ 14, 2017 Douglas Karr
သင်၏ဖောက်သည်များ (သို့) အီးမေးလ်ပေးသွင်းသူများ၏လူ ဦး ရေဆိုင်ရာလူနေမှုအဆင့်အတန်းကောင်းတစ်ခုကိုသင်ရဖူးပါသလား။ ကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့စာရင်းများကိုအီးမေးလ်လိပ်စာများနှင့်လိုက်ဖက်ရန်ကုမ္ပဏီများသို့ပေးပို့ရန်အတွက်အတော်အတန်ပေးဆပ်ကြသည်။ အမှန်တရားကတော့မင်းလုပ်စရာမလိုပါဘူး။ စီးပွားရေးအတွက် Facebook အတွက်ခိုင်မာတဲ့အစီရင်ခံစာတွေရှိတယ်။ သူတို့ကမင်းကိုတစ်ပြားမှမပေးဘူး။ Facebook ရဲ့ Custom Audience tool ကိုသုံးပြီးသင်၏ကိုယ်ပိုင် email list ကို upload လုပ်ပြီး run နိုင်သည်